WARARKA SOOMAALIYA | Archive | WARARKA MAANTA | 5
Home » Archives by category » WARARKA » WARARKA MAANTA (Page 5)
Eden Hazard Ma Muslimbaa mise diin kale ayuu haystaa?
5 oktober, 2018 No Comment
Dad badan ayaa waxa isseydiiyaan Hazard ma Muslimbaa mise maya. Eden Hazard ma ahan muslim waana xidiga aan haysan diin laakiin waxa oo kusoo koray xaafad ay dagen yihiin Muslimiin badan oo lagu magacaabo Födelseort La Louvière. Eden Hazard saaxiibadiisa waxa ay ahaayeen Muslimiin sababtane waa diigaanka oo kusoo koray oo u badan yihiin dhalinyaro […]
Ross Barkley in xulkeyga la iga waco waxaan uga mahadcelinaa macalin Sarri
Ross Barkley ayaa waxaa laga wacay xulka England kulamada oo ciyaari doono qaramada kale, xidiga ayaa ka maqanaa koobka aduunka. Barkley ayaa sheegay wicista looga yeeray xulka England in oo uga mahadcelinaa Macalin Sarri oo fursad u siiyey in ciyaaro kooxda Chelsea dhowr kulan oo muhiim ah. In aan ka maqnaado xulka England kulamadii ay ciyaareen […]
Waxaan soo bandhignay taageerayaashii saadaasha ka bixiyey xidiga dhaliyey goolka ugu horeeya.
Waxaan soo page facebook soo dhignay su,aal aheed yaa dhalin doona goolka ugu horeeyey kulankii Chelsea guushaka gaartay kooxda Videoton. Waxaa jira dhowr asxaabta Chelsea taageerta oo nasiib u yeeshay in aan kusoo bandhigno Website wararkachelseafc.com halka aan horey ugu soo bandhigi jirnay facebook. Hadii Alle idmo sadaal kaste waxaan kusoo bandhigi doonaa website halka […]
Daawo Goos Gooska Ciyaartii Chelsea guusha ka gaarta kooxda Videoton.
Alvaro Morata Oo Kooxdiisa Chelsea Ka Badbaadiyay Bar-Baro Ay La Gali Lahayd Vidi, Gool Ayuu Guul Ugu Hogaamiyay
Kooxda chelsea ayaa guul muhiim ah ka gaadhay kooxda Vidi Fc Kulan ka dhacay garoonka Stamfor Bridge kana tirsanaa kulankii 2-aad ee wareega Group-yada tartanka Europa League. Kulanka ayaa ahaa mid ku adag labada kooxood iyada oo ay soo bandhigeen qaab ciyaareed fiican oo isku dheeli tiran kuna doonayeen in ay ku dhaliyaan goolasha ay […]
Eden Hazard oo banaanka soo dhigay in oo Muslim yahay Daawo Video.
Weeraryahanka kooxda Chelsea ugu ciyaara garabka ayaa mudo laga shakisanaa diinta oo haysto laakiin mar laga duubay muuqaal oo ugu hadlaayey in goolal badan dhalin oo gaaraya ilaa 40. Su,aal ayaa la weeydiiyey xidiga oo ah goolal badan ma dhalin doontaa oo gaaraya ilaa 40 gool waxa oo ku jawaabay Insha Allah waan dhalin doonaa. […]
Eden Hazard Oo Sheegay In Uu Joojin Doono Dabaal Dega Uu Jilbaha Ku Ordo Marka Uu Goolka Dhaliyo, Maxayse Tahay Sababtu?
Xiddiga Kooxda Chelesea ee Eden Hazard ayaa shaaca ka qaaday in lagu qabsay in uu joojiyo dabaal deg uu sameeyo marka uu goolasha u dhaliyo kooxdiisa isaga oo sidoo kale sharaxay sababta ka dambaysa ee loogu diiday dabaal dega. Eden Hazard aYaa sheegay in lagu qasbay in uu joojiyo dabaal degigii uu jilbaha ku ordi […]
Xidigaha kooxda Chelsea oo caawo soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan.
4 oktober, 2018 No Comment
Waxaa soo dhamaaday qaybtii 1aad ee ciyaarta waxaa lagu maqan yahay qaybti nasiinada. Kooxda Chelsea ayaa inta badan waxa ay haysatay kubadda laakiin waxaa dhowr fursad soo martay xidiga weerarka ugu ciyaara Chelsea ee Alvora Morata kasoo laga bad baadiyey fursado dahabi ah. Loftus ayaa caawo aad garoonka ugu dhex muuqday waxa uu helay fursad […]
Shaxda Rasmigaa ay Chelsea kusoo galin doonto Garoonka kulanka ay wajahee kooxdaVideoton.
Kooxda Chelsea ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Videoton kulan ka tirsan horyaalka Europ League. kulankii hore Chelsea waxa ay soo garaacday kooxda Paok kadib booqashadii ay ku tagtay garoonka ku yaala dalka Greece, waxaana goolka u dhaliyey ciyaaryahan Willian. Kooxda Videoton ayaa caawo soo booqanee garoonka Stamford iyo macalinka cusub ee Chelsea Sarri oo […]
Macalin Sarri oo isbedel weyn ku sameeyey kooxda kulanka Caawo ciyaaraa iyo xidigo cusub…
Chelsea ayaa caawa ciyaari doonta kulankeedii labaad ee Europe League iyadoo lagu wado in tababare Sarri uu safkiisa ku sameeyo todobo ilaa Toban badel. Blues ayaa kulankii ay ku furatay horyaalada Yurub ka adkaatay PAOK Salonika, waxayna intaa kaddib la ciyaartay West Ham horyaalka Ingiriiska iyo Liverpool ay labo mar is qabteen. Axadana waxaa Premier […]